Shiinaha Warshad toon ah oo Fresh ah | Nongchuanggang
Toonta oo leh in ka badan 200 oo maado oo waxtar u leh caafimaadka jirka iyo maskaxda, marka lagu daro borotiinka, fiitamiin E, C iyo kaalshiyamka, birta, selenium iyo cunno kale oo nafaqo leh, tan ugu walwalsan ee qof walba waa in la wanaajiyo difaaca jirka aadanaha. - allylcysteamine (SAC), iyo xooggeeda bakteeriyada ee allicin.
Haddii toontu ku qasto ukunta, waxay xakameyn kartaa xididdada dhiigga iyo gabowga maqaarka, ukunta ukunta leh lecithin waxay ka saari kartaa isku dhejinta kolestaroolka derbiga marinka dhiigga, waxay door ka ciyaareysaa hoos u dhigga kolestaroolka. Intaas waxaa sii dheer, beedka beedku wuxuu kaloo leeyahay fitamiin E qaniga ah, wuxuu xakameyn karaa aashitada firfircoon, wuxuu yareyn karaa xididdada dhiigga iyo gabowga maqaarka; Toontu waxay hagaajisaa wareegga dhiigga. Isku soo wada duuboo kan kaliya ma yeelan karo saameyn kahortagga gabowga, inaad ka cabsato daaweynta cudurka qabow xitaa timo jarista ayaa sidoo kale leh saameyn wanaagsan. Kuwa aan jeclayn urta cadarka leh ee toonta, toon leh jaallo ah waa xulasho wanaagsan. Waa isku dar ah toon la shiiday iyo jaallo ah, ka dibna si tartiib ah ayaa loo shiilaa. Ma aha wax xanaaq badan ama calool-kicinaya.
Intaa waxaa dheer, qaybo ka mid ah ayaa sidoo kale ka hortagi kara cudurrada qaar ee habka neefsashada, sida xasilinta cadaadiska dhiigga, hagaajinta nidaamka wareegga dhiigga, ka hortagga isu-geynta unugyada, ka fogaanshaha dhiig-baxa, xakameynta glycolysis, iwm. Sidaa darteed, toontu maahan oo keliya daruuriga oo dhan ee karinta, laakiin sidoo kale habka ugu muhiimsan ee looga hortago loona daaweeyo cudurada geedi socodka nolosha oo dhan.
Lambarka Moodalka A1
Magaca badeecada Garlic
Kala duwanaansho Toon cad oo caadi ah
Cabir 4.5-5.0cm, 5.0-5.5cm, 5.5-6.0cm, 6.0-6.5cm
Waqti badbaadi 9 bilood oo lagu jiro xaalado habboon
Tirada ugu yar 28 tan
Xirmo bacda mesh ama kartoonka
Waqtiga dirida 7 maalmood gudahood
Dekedda Dekedda Qingdao
Hore: Garlic fuuqbaxay
Xiga: Toon la qaboojiyey